थाहा खबर: प्रदेश राजधानी 'सार्ने' काम षड्यन्त्रपूर्ण : कांग्रेस नेता गिरी
प्रदेश राजधानी 'सार्ने' काम षड्यन्त्रपूर्ण : कांग्रेस नेता गिरी
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले बहिस्कार गरेका छन्। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेको कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठक बोलाउन पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए। यही मेसोमा सभापति देउवाले बोलाएको बैठक केन्द्रीय सदस्य गिरीले बहिस्कार गर्नुका कारणबारे थाहाखबरकर्मी लिलाराज खनालले गिरीसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार नै किन गर्नुभयो?
कांग्रेसको बैठक धेरै समयपछि बसेको हो। माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीलाई बनाउने घोषणा गरेर दाङका जनताको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको हुनाले बैठक बहिस्कार गरेको हुँ। म दाङकै जनप्रतिनिधिको हैसियतले मात्र भनको होइन, भौगोलिक रूपमा पनि रुकुम र बर्दियाका जनतालाई पायक पर्ने ठाउँ दाङ नै हो।
५ नम्बर प्रदेशको एआईजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) कार्यालय, उच्च अदालत र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि कार्यालयसमेत दाङमा राखिएको छ। सरकारले गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत दाङलाई नै उपयुक्त भनेको अवस्थामा सरकारले रातारात दाङबाट प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीमा सार्ने काम षड्यन्त्रपूर्ण भएकाले त्यसको घोर विरोध गर्दै बहिस्कार गरेको हुँ।
९० प्रतिशत ५ नम्बर प्रदेशका जनताको चाहनाविपरीत आएका निर्णयको विरोधमा बैठक बहिस्कार गरेको हुँ।
प्रधानमन्त्री नै कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा बहिस्कारले समाधान दिन्छ र?
किन यस्तो निर्णय भयो भनेर मैले सभापति (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)ज्यूलाई सोध्दा ‘राजधानी तोक्ने निर्णय सरकारले गरेकै छैन। प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई शपथ ग्रहणका लागि स्थान तोकेको मात्र हो’ भन्नुभयो। नेपाल जस्तो देशमा विरोध गर्नुपर्दा बहिस्कार प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक माध्यम लागेर बहिस्कार गरेको हुँ।
आफ्नो यो मागलाई अब कसरी उठाउनु हुन्छ त?
हेर्नुस, म राजनीतिमा प्रवेश गरेको ठूलो मान्छे बन्नलाई हुँदै होइन। म अधिनायकवादविरुद्ध लागेको हुँ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट दबाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेकै छु। एउटा कर्नरलाई राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुँदैन। ३ नम्बर प्रदेशमै हेर्नुस् त, रसुवा र रामेछापका जनतलाई कति दु:ख हुन्छ? ५ नम्बर प्रदेशको मध्यविन्दु दाङ हो। बुटवल वा भैरहवा शहरीकरण भइसकेका छन्। हावापानी, फाँट आदि कारणले पनि दाङ उपयुक्त ठाउँ हो।
दाङलाई नेपालकै राजधानी बनाउन मिल्छ भनेर भनिरहेको बेला यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विचार पुर्‍याउनुपर्थ्यो भनेको छु।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय किन लिनुभयो होला?
खै किन र कहाँबाट यस्तो निर्णय गर्नुभयो? मलाई थाहा छैन। होइन, प्रहरी, अदालत र निर्वाचन कार्यालय किन दाङमा तोकेको? मलाई मात्र होइन, नेपाली जनता र ५ नम्बर प्रदेशका जनतालाई चित्त बुझाउनुपर्‍यो। पार्टीभित्रैबाट पनि त्यस्तो दबाब दिइएको रहेछ।
प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानको उपाय के होला?
हेर्नुहोस्, दाङमा आगो बलिरहेको छ। त्यसलाई निभाउन भूमिका सरकारले खेल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङबाट अन्यत्र सार्ने निर्णय सच्याउनुस्। दाङका जनताका जायज मागलाई संबोधन गर्नुपर्‍यो नि!